Hindiya: Ciidamo bilays ah ayaa bilaabay inkasta oo ay xukuumadda J & K amar ku bixiso in ay awood u yeelato in ay isticmaalaan wadooyinka gebi ahaanba laba maalmood asbuucii India News - TELES RELAY
ACCUEIL » International Hindiya: Ciidamo bilays ah ayaa bilaabay inkasta oo ay xukuumadda J & K amar ku bixiso in ay awood u yeelato in ay isticmaalaan wadooyinka gebi ahaanba laba maalmood asbuucii India News
Hindiya: Ciidamo bilays ah ayaa bilaabay inkasta oo ay xukuumadda J & K amar ku bixiso in ay awood u yeelato in ay isticmaalaan wadooyinka gebi ahaanba laba maalmood asbuucii India News
SRINAGAR: Ciidanku ma xaddido dhaqdhaqaaqa hubka ee wadada weyn Baramulla at Udhampur ilaa Arbacada iyo Axadda, laba maalmood asbuucii ilaa May 31, oo ku dhawaaqay dawladda gobolka. si loo isticmaalo si khaas ah ciidamada amniga, maadaama ay tani saameyn doonto howlgalkooda.
Isku-shaandhayntii ciidan ayaa la arkay Isniintii oo ku yaal dooxada Kashmir. Saraakiisha Ciidamada, oo ka hadlayey xaalad aan la aqoonsaneyn, ayaa sheegay in amarku uu hakin doono hawlgallada milatari. Saraakiishu waxay sheegteen in aysan jirin cid la tashi (rasmi) la leh ciidanka kahor inta aan la soo saarin amar. "Intii lagu jiray wadahadal aan rasmi ahayn, waxaa loo caddeeyay saraakiisha dawladda in amarkaasi aan la fulin karin," askar ku lug leh dhaqdhaqaaqa gawaarida ayaa u sheegay PTI Isniintii.
Wasiirkii hore ee J & K Omar Abdullah fiidiyoow fiidiyoow ah oo ah kolonyo ciidan markii ay socdeen isgoysyada dadka rayidka ah sida caadiga ah dhinaca dhinaca kale ee wadada. "Halkan waa kolba dhammeystiran. Anigu waxaan isku dayayaa inaan tilmaamo naqshadaynta xidhitaanka wadada weyn ma aysan sameyn wax dalab ah oo maskaxda ku haya. Hal dhinac ama mid kale, kolonyada wadada weyni waa ammaan, laakiin ma samaynayso maanta. waxay ahaayeen shalay (Axad) oo ma noqon doonto Arbacada, "tweeted Omar Abdullah.
Halkan waa kolba dhammeystiran. Waxaan isku dayayaa inaan tilmaamo dhibta in dhajiyeyaasha wadada ay leeyihiin ... https://t.co/4PRzXcyZiH
"Haddii ay amaan u tahay SF Convoys waa inay u guuraan Isniinta adigoo xiraya wadada weyn ee gaadiidka rayidka ah, maxaad ugu badbaado Arbacada iyo Axadaha? Waxba kicin ma'aha amarka amarka in ka badan dhaqdhaqaaqyada ciidamada ee maalmo aan ammaan ahayn. Wadadani waa qayb ka mid ah wadada weyn ee waddada, "ayuu raaciyay madaxa shirweynaha qaranka.
Dhanka kale, Maxkamadda Sare ee Jammu iyo Kashmir on Tuesday weydiiyay jawaabta dawladda gobolka on baryootankayga ka dhanka ah xiritaanka of jidka u dhexeeya Baramulla Udhampur, laba maalmood toddobaadkii.
Maxkamad maxkamad ah oo ka kooban Garsoorayaasha Sare Geeta Mitch iyo Tashi Rabastan ayaa soo saaray ra'yi, kaas oo ay aqbaleen taliyihii sare ee xukuumadda. "Xukuumadda ayaa amar ku bixisay in ay la timaado qorshe beddelaad ah iyo talooyin kale berri."
Codsiyada waxaa soo gudbiyay qareen, Mir Shafaqat Nazir, iyo Shah Faesal, oo ahaa sarkaalkii hore ee IAS oo abuuray xisbi siyaasadeed horaantii sanadkan. Labaduba waxay ku weydiinayaan joojinta amarka 3 April ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
"(Xoghayaha Dawladda) The, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Xoghaynta Civil, ka dhigay si aan loo aabo yeelin oo cadho ee taariikhda 03.04.2019, oo labo maalmood toddobaadkii, kuwaas on Wednesday iyo Sunday hayay ee u socdaalaya kolonyo ka tirsan ciidamada ammaanka, marka aysan jiri doonin wax gaadiidka rayidka ah wadada isku xidha Baramulla in Srinagar, Qazigund, tunnel Jawahar ah, Banihal in Ramban in Udhampur ka 4 in 17 saacadood, "Shafaqat oo dhigaya in weyddiistaa.
"Si Tani waa sharci-darro ah oo aan dastuuri ahayn, sababtoo ah waxaa la sameeyey xadgudub ku ah xuquuqda hubo in codsadaha by Articles 14, 19 iyo 21 Dastuurka," ayuu yiri.
Shafaqat ayaa sheegay in hoosta CPC 144 maqaal oo keliya qaan-gaari fuliyaha ayaa laga yaabaa inuu ku soo rogo xayiraad ku saabsan dhaqdhaqaaqa dadka ku jira xaaladaha deg dega ah ee khatarta la qabtay, iwm.
"(Xoghayaha ugu weyn ee xukuumadda, guriga) ma laha awooda iyo awooda si ay u sameeyaan amar lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa dadka. Amarka la soo oogay ayaa ah sida aan loo tixgelineynin indhaha sharciga oo u qalma in la tirtiro, "ayuu yiri.
Shah Faesal wuxuu sharaxay mamnuucista ku xad-gudubka xuquuqda asaasiga ah ee uu u-xaqiijiyey QMUMX iyo 19 ee Dastuurka Hindiya. Qareen Lawyer Tasaduk Khuwaja iyo qareenka sare ee Maxkamadda Sare Ehsan Javed, iyo sidoo kale qareennada kale, waxay hadda ka shaqeeyaan arrinka IPL ee Faesal.
Canada - Canada: Jetlines ayaa hoos u dhacaya ilaa December
ADEMA Dembiilayaasha Maaliyadeed - Bamada.net